The Gardener: 2009-04-19
ချစ်သူနဲ့ငါ ဆုံဖြစ်ခဲ့ကြ ...
နင်းဖြတ် လျှောက်လှမ်းသွား ...
... နှင်းစက်ပွင့်တွေ တဖွဲဖွဲကြွေတဲ့ နံနက်ခင်းတစ်ခုပေါ့ ... စံပယ်ရနံ့တွေ ဖွေးဖွေးဖြူ .. စိုစွတ်လှပနေတယ် ... ဇာတ်သိမ်းမကောင်းတတ်တဲ့ ပြဇာတ်တွေလှပသလိုမျိုးပဲလား .. ၊နှင်းစက်လေးရေ ... အလင်းရီဝိုးတ၀ါးအောက်မှာ .. နင် ... ငါ့ဥယျာဉ်ထဲကို နင်းဖြတ်လျှောက်လှမ်းသွားတယ် .. မှိုင်းညို့ လွမ်းဆွတ်တတ်တဲ့ နှင်းစက်လေးတွေပေါ့ .. တကယ်ပဲ .. နင်းဖြတ်လျှောက်လှမ်းသွားခဲ့တယ် ...။
သစ်ပင်ပေါ်မှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းခဲ့သလို ..
ချစ်ခြင်းကို အသာ လက်ခံလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ် ...
ငါကလည်းငယ်ရွယ် မိုက်မဲ ..
ရွှေအိုရောင်ခြေလှမ်းတွေ သစ်လွင်လို့ပေါ့ ... ကောင်မလေးရေ ..အရှေ့မြောက်လေရဲ့ တိုးသဲ့တဲ့ရယ်သံ ..လင်းမြတဲ့ အပြုံးတစ်စကို ... ပန်းတွေကိုချစ်တဲ့ ဥယျာဉ်မှုးလို ... ငေးမောကြည်နူးနေခဲ့ ... ကံတရားအကြောင်းမပြောပါနဲ့လား ... လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေများတာကို ငါသိပါရဲ့ ... ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးသယ်ဆောင်သွားလို့မရဘူးတဲ့လား ... ၊သစ်ရွက်လေးကို ငါချစ်ပါတယ် .. ဒါပေမယ့်ကွယ် ..ကျေးဇူးပြု၍ .. ကျေးဇူးပြု၍ပါ ... မြူနှင်းပုဝါလေးရယ် ... ဖြူဖြူလေးပဲ ဆက်ပြီးပြုံးနေလိုက်ပါ ..၊ သံသရာပေါင်းများစွာ .. ဆောင်းခေတ်အဆက်ဆက် နှလုံးသွေးတွေစက်လက်နဲ့ .. နွေးထွေးနေနိုင်မယ်လို့ .. ငါမိုက်မဲရဲတင်း ... ယုံကြည်ပစ်လိုက်တယ် ...။
ချစ်သူနဲ့ငါ .. ရပ်နေခဲ့တယ် ...
ယိုင်မှီထားတဲ့ ကိုယ့်ပခုံးကို ..
ဘ၀ကို အသာအယာ ခံယူဖို့
ငါကလည်းငယ်ရွယ် မိုက်မဲ ..ခဲ့ပါရဲ့ ..
နေညိုချိန်တွေစောခဲ့ ..ဆောင်းညနေခင်းဟာ တစ္ဆတစ်ကောင်ရဲ့အေးစက်နေတဲ့လက်ပဲလား ကောင်မလေးရေ .. ၊ စီးဆင်းသွားတဲ့စမ်းချောင်းလေးကိုငေးလို့ပါပဲ ... ကိုယ့်ခြေထောက်တွေကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ ဒဏ်ပေးခံထားရတဲ့ကလေးလေးလို ... လေပြည်လေးတွေဟာ ငါတို့ကို ကွေ့ပတ်ရှောင်ကွင်းသွားကြတယ် ... မင်းရဲ့မျက်ရည်တစဟာ ငါ့နှလုံးသားရဲ့မနိုင်ဝန်တစ်ခုပါပဲ ... ချစ်ခြင်းတရားကိုစိုက်ပျိုးပြီး အလွမ်းပွင့်တွေရိတ်သိမ်းခွင့်ရလိုက်သူရဲ့ ရင်ခုန်သံတွေမှိန်ဖျော့ ... တွဲထားတဲ့လက်တွေပြေလျော့ .. တဆစ်ဆစ်တိုးမြှင့်လာတဲ့ ခါးသီးတဲ့အပူရှိန်တစ်ခုဟာ .... ငါ့တို့ကိုရှို့နေတယ်ထင်ရဲ့ ...။ ဒါဟာကံတရားသက်သက်နဲ့ ဆက်တင်ဆင်ထားတဲ့ အိပ်မက်လေလား .... ချစ်သူရေ ... မင်းရဲ့ ကိုယ်ငွေ့လေးနဲ့ဝေးသထက်ဝေးခဲ့တယ် ... တရွေ့ရွေ့ ...။ ဆောင်းဘူတာလေးနဲ့လမ်းခွဲထွက်လာတဲ့ရထားလေးလို ...သံလမ်းတွေတစ်လျှောက်တရွတ်တိုက်ပြေးလွှား .. ..... ဝေးသွားခဲ့ပြီပဲမဟုတ်လား ... ကောင်မလေးရယ် ...။ ဆောင်းရာသီဆန်ဆန် ကြေကွဲမှုတွေသာ ရစ်သမ်မှန်နေခဲ့ ... နေ့တာတိုခြင်းဟာ ညတာရှည်ဖို့သက်သက် ... ဇီဇ၀ါ ပွင့်ဖတ်ပွင့်ချပ်ကြားက ပိုးကောင်လေးလို ... သတိရခြင်းဟာမွှေးမြခိုင်ခံ့စွာ ...၊ မတူညီမှုအတွက် အဖြေတစ်ခုဟာ မျှော်လင့်ထားတာထက် နည်းနည်းလေးစောပြီး ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ... အတိအကျရောက်လာခဲ့တယ် ... တကယ်တော့ မင်းနဲ့ငါ ကြိုသိထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲမဟုတ်လား ... ကောင်မလေးရယ် ...။ ။
Dedicated to sis, and also William Butler Yeats :
Z ရဲ့ ဗားရှင်းပါ ... ထမင်းချက်ကြီး ရိတိတိကတော့ သူ့ကဗျာကို ကျွန်တော်က ဘာသာပြန်တာများကြားရင် သေရွာကထပြီး. ....၀မ်းနည်းလွန်းလို့ ဒဗ္ဗလင်မြို့တောင်ပတ်ပြေးနေတော့မယ် ....။ သူရခဲ့တဲ့ နိုဗယ်ဆုကြီးကို တစ်ဖက်က ကိုင် ... ကျွန်တော်တလွဲပြန်ထားတာတွေကို တဖက်က လက်ညှိုးထိုး ... တရှုံ့ရှုံများငိုနေဦးမလားမသိနော် ...။ ဆရာမောင်သာနိုးနဲ့ ကိုတာရာမင်းဝေတို့လည်း သူတို့ဘာသာပြန်တာကိုများ မပြည့်စုံလို့ များလားလို့ ပြန်သုံးသပ်ကြဦးမယ်ထင်ပါရဲ့နော် ...။ အော် ... သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဖို့ရောက်မူ ...သုံးယောက်သူမှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်းပေါ့ ....။း)
၁. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
၂. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
၃. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
၄. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
၅. ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ ...
တခါတုန်းက ဧဒင်ဥယျာဉ်မှာ ...။
ပန်းပျိုးတဲ့လက်တွေ ခိုင်မာသန်စွမ်း ...
သက္ကရာဇ်တွေဖြိုထားတောင် ... လွမ်းမိတဲ့တရားဟာ .. ၀ှန်တက်ပျံသန်း..။
အဲဒီအသံလေးကို ဟဒယ၀တ္ထု ထဲမှာ သံမှိုနဲ့ ရိုက်သွင်းထားလိုက်တယ် ...။
..... whatever will be, will be တဲ့လား ...၊သီချင်းသံလေးက စိတ်ကိုသတ်နေပြန်တယ် ....။
သက်တရာတမ်းဟာ ... ဟုပ်ခနဲငြိမ်းခဲ့ပြန်တယ် မေမေ ...။
Dedicated to all mothers on earth who love their offspring much more than their life, dignity and their dreams. I pay homage to all of them who had been shown their eternal love to us ... by sacrificing their most valuable life for our future. As the old cliche, GOD created mothers on behalf of him : I value all mothers on earth and always wonder their unconditional loving-kindness provided us 24/7. She who has ears to hear : let her hear .. The braveness of the mothers is the most beautiful creation everyone can thought of in life. Congratulations to all mothers on earth; you all are the greatest warriors of the real world and the strongest trees on atop the windy hill.
သုညမရခဲ့သော ကောင်လေး ....။
၂၂ ကာကာ ၈(ရှစ်)လို့(ရခိုင်လို ချစ်လို့ ...လို့ပြောတာ)ဆိုပြီး
၄၄ နက်နက် မဟုတ်ပဲ
၇ကျပ်တိတိ (ရိတိတိ) လာလာလုပ်တယ်
၆ခြားလောက်တဲ့ အသိအမြင်နည်းမှုနဲ့ ..
၅ပျံတစ်လှည့် မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဗုံလုံသက်သက် .... ။ ။
(မှတ်ချက် ...။ ၇အိမ်ကြား ၈ အိမ်ကြား အသံဗြဲကြီးနဲ့အော်နေတာနဲ့ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ချစ်ခွင့်မပန်နိုင်လိုက်ဘူးဆိုရင် sorry ပါနော်... လောကကြီးမှာ ယင်ကောင်လည်းရှိဖို့လိုသလို ... တီကောင်လည်းရှိဖို့လိုတယ် ... ဟန်ချက်ထိန်းထားရတာကိုး ... လူစစ်စစ်တွေလည်းရှိမယ် ... လူဖြစ်ကာစ အသွင်ပြောင်းစလူဆိုတဲ့ အရိုင်းအစိုင်းတွေလဲရှိမယ် ... ပန်းပွင့်တွေရှိသလို .... အနုမြူဗုံးတစ်လုံးလည်းရှိလိမ့်မယ် ....လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ... တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုကို တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအတွက်သက်သက်ပါပဲ လေ....။)
ဒီနေ့ အတွက် ဒိုဟာ
a doha by Rahim:
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग |
चन्दन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग ||
ရသေ့လေးတစ်ပါးက ကြယ်ကလေးကိုငေးနေတယ် ..
ကြယ်ကလေးက လရောင်လေးကိုငေးနေတယ် ...
လရောင်လေးက ပန်းပွင့်လေးကိုငေးနေတယ် ...
တိမ်မျှင်လေးက စမ်းချောင်းလေးကိုငေးတယ် ..
စမ်းချောင်းလေးက ရသေ့လေးကိုငေးနေတယ် ...။
အဲဒီမှာ သံသရာဟာတစ်ပတ်ပြည့်တယ် ...။
လွမ်းလိုက်တာ ...။ ။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုသည်မှာ သင်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ ၏အိမ် ...
Multiply မှာ http://kotoegyi.multiply.com တင်ထားတဲ့ ဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းတွေကို ကူးလာပါတယ် ...။ သဘောကျနှစ်ခြိုက်လို့ ပါ ... စာတွေကိုတော့ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်ပဲရေးလိုက်ပါတယ် ...
ကျွန်တော် အတွက်တော့ ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်လို .. သူ့ကာတွန်းပုံလေးတွေက လေးနက်လှပနေတယ် ...။
ငါတို့ရဲ့ တာဝန်မဲ့မှု ..
အခုတော့ အရိပ်နေရင်း အခက်ချိုး .. အပင်နှုတ်သူတွေဟာ ...
ငါတို့မှ ..ငါတို့ စစ်စစ် ...။ ။
ငါလစ်လျူရှုခဲ့တဲ့ ... စက္ကူဖြူတွေကြောင့် ...
ငါတို့ဟာ ပုဆိန်ကို ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် ...စက်လွှတွေကို ဖန်ဆင်းတယ် ...
သွေးသံရဲရဲ ... သစ်ပင်လေးတွေလဲနေတယ်ကွယ် ...။
ငါသင်ကျွန်ုပ်တို့ဟာ .. Brutus
... တစ်ရှိုက်ရှူဖူး သူ့ကျေးဇူးဆိုတာကိုမေ့နေကြပြီ ...။
ငါတို့ ရက်စက်ခဲ့ကြ ...။
ဆည်တွေဆောက်တာဟာ ... ဆင်ခြင်ဉာဏ်မရှိရင် အန္တရယ်များတယ်ဆိုတာ ငါတို့အားလုံးအသိ ..
ဒါပေမယ့် .. ငါတို့ ပြောတာကို .... သူတို့ ကြားပါ့မလား ..
ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကရော ... သူတို့နားလည်အောင် ... ပြောပြဖို့ ... စောင်းတွေ မလုံလောက်လို့လား ....
ဒါမှမဟုတ် ... ပိုးကြိုးဖိုးမရှိတော့တဲ့ မောင်ပုံလား ..။
အနည်းဆုံးယူပြီး ...အများကြီးပေးသွားတယ် ..
ဗန်ဂိုး ..(မူကွဲ ဗန်းဂေါ့ခ်ျ) ရဲ့သွေးစက်တွေပဲလား ...
လက်ချင်းတွဲဆုပ်... တောအုပ်လေးလုပ်ပြီး ... မိုးခေါ်တေးတွေ တကြော်ကြော်အော်ဆိုတယ် ...။
တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ ..
ငါတို့သုံးတဲ့ .. gas ပါတဲ့ body spray တွေ ..
နောက်ဆုံး ..correction pen တွေ ..
လေအေးပေးစက်တွေ .... ကြောင့်ိဆိုတာ ငါတို့သိပါတယ်
vicious cycle ကို ငါတို့ရှောင်လို့မရ ..
chain effect ရဲ့ အစနဲ့ အဆုံးမှာ .. ငါတို့ ခွထိုင်နေတာပဲမဟုတ်လား ..
Happy Feet ကိုသတိရတယ် ...
ဒီအတိုင်းဆိုရင် နောင်လာနောင်သားတွေအတွက် ပင်ဂွင်းငှက်ဟာ ... ပုံပြင်ထဲမှာပဲတွေ့ရတော့မယ် ...
ဒါဟာ ... ငှက်တွေကို ကယ်လိုက်ရုံလေးမဟုတ်ဘူး...
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကယ်တင်တဲ့ အလုပ်လည်းဖြစ်တယ် ....။
ငါမရှိရင် ..မင်းဘယ်မှာနေမှာလဲလို့ ကမ္ဘာကြီးကပြန်မေးနေပြီ ...။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူတွေချည်းနေလို့မရဘူး ..
ဒါကို မေ့ထားလို့ရတယ် ...
ဒါပေမယ့် မေ့ထားလို့ မရနိုင်မယ့်နေ့တစ်နေ့လည်းရောက်လာဦးမယ် ...
မုန်တိုင်းတွေ ...အင်အားကောင်းလာတာ ပတ်ဝန်းကျင်ပူနွေးလာမှုရဲ့ သိသာတဲ့ လက္ခဏာလို့ဆရာအော်ပီကျယ်ကပြောတယ် ...။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငတေလေး မာနေသေးသ၍ပဲလား ...
မေးခွန်းရော အဖြေရော ... သင့်ရင်ဘတ်ထဲမှာပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါ ...။ ။
ဇင် ...(ဂျပန် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျင့်စင်) ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ငယ်ချစ်ဦးပါ ...။
မမျှော်လင့်ဘဲ ... လမ်းခွဲခဲ့ရပေမယ့် ... ကျွန်တော် မှတ်မိနေတုန်းပါပဲ ...။
အခုလည်း သူ့ကို လှောင်တာမဟုတ်ရပါဘူး ...။
လမ်းမှာတွေးမိတာလေးကို မမေ့ခင်ချရေးလိုက်တာပါ ...။
မေ့ထားတာကြာပါပြီ ...။ အစ်မတော်က အစဖော်ပေးလိုက်တာနဲ့ .. ပြန်တွေးမိသွားတယ် ...။ တကယ်တော့ သိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အချစ်ဦးပါ ...။ :)
စင်္ကြံလျှောက်နေတဲ့ ဥယျာဉ်ရဲ့ အရောင်၊ အနံ့ အရသာ မရှိဆိုတဲ့ အဘိုးနဲ့ ဆုံခဲ့တယ် ...။
သူက လူကို မြင်တာတောင် ..
သူ့မျက်ကြည်လွှာကို မြင်သလောက်တောင် အရေးမစိုက်ဘူး ..
ပြီးမှ ... ဘယ်သူ့ကိုမှ မရည်ရွယ်တဲ့ ပုံစံနဲ့
မင်း ... ဆရာသခင်ဆီသွားဖို့ အချိန်တန်ပြီတဲ့ ...။
ဒီလိုနဲ့ အေးချမ်းတဲ့ ကျောင်းဝင်းလေးထဲကို ကျွန်တော်ရောက်လာဖြစ်ခဲ့တယ် ...
အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ကို နှစ်ထားကြတဲ့ ကိုယ်တော်တွေ ...
မမွေးခင်တုန်းက မျက်နှာကို ပြန်ရှာနေသူတွေ ..
သုညရဲ့ သဘာဝကို စေ့စေ့ငှငှ လေ့လာနေသူတွေ ...
အခန်းထဲမှာ အပြည့် ...
နေပူလို့ ဆောင်းလာတဲ့ ထီးလေးကို အခန်းရဲ့ ဥတ္တရစွန်းက သတ္တမြောက် စင်ပေါ်မှာ ... သေသေသပ်သပ်တင်လိုက်တယ် ..။
စီးလာတဲ့ ဖိနပ်ကို စင်ရဲ့ ၇၅ ဒီဂရီစောင်းပြီး ... သုံးလက်မခွာပြီးချွတ်ထားလိုက်တယ် ...။
ဘယ်တော့မှ ခြေသံမမြည်ခဲ့တဲ့ ခြေထောက်ကို သတိကပ်ပြီး ... ဆရာသခင်ဆီလျှောက်လာခဲ့တယ် ..။
မင်း ဉာဏ်များတယ် ... နောက်နှစ်မှလာခဲ့ ...
ဒါနဲ့ပဲ ... တောင်စွယ်ကို ကွယ်ခဲ့တဲ့နေလို ရုတ်ခနဲ ကျွန်တော်ထပြန်ခဲ့လိုက်တယ် .....။
သိပ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ၀ါးမင်းပင်ပုလေးကို လက်မှာကိုင်ရင်း ... ဆရာသခင့်ခြေရင်းမှာဝပ်စင်းနေခဲ့ပြန်တယ် ..။
ရေပုံးမှောက်သွားတဲ့နောက် .. လ ဘယ်ရောက်သွားလဲ ...။
မင်းခံစားနေတယ် .... နောက်နှစ်မှလာခဲ့ ....။
ဆရာသခင်ရဲ့ တပည့်တွေ ဆာတိုရီ အလျှိုလျှိုရကုန်ကြပြီ ....
ကျွန်တော် ခရမ်းပြာပန်းပွင့်လေးကို လက်ထဲမှာကိုင်ရင်းဆရာသခင့်ဆီရောက်ခဲ့တယ် ...။
ဗရှိုးရဲ့ဖားရေထဲခုန်ချသွားတယ် .. .မင်းဘာကြားသလဲ ..
ရေထဲမှာ မှော်တွေများတယ် ဆရာသခင် ...
မင်းအမှန်ကို ရှောင်နေတယ် ... နောက်နှစ်မှလာခဲ့ ...
နောက်ထပ်တစ်နှစ်ဟာ လေစီးထဲမျောပါသွားတယ် ...
ကျွန်တော် .. ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတော့ လက်ထဲမှာ ပုလွေလေးတစ်လက်ပါသွားခဲ့တယ် ...
မြှောက်ထားတဲ့ ဆာမူရိုင်းရဲ့ ဓားဟာ နိဗ္ဗာန်လား၊ငရဲလား ...
မေတ္တာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို ကျွန်တော်မသိဘူး ဆရာသခင် ...။
မင်း ..လမ်းလွဲနေပြီ ချစ်သား ... နောက်နှစ်မှလာခဲ့...။
နောက်ထပ်တစ်နှစ်မှာ ကျွန်တော် စံပယ်ပင်လေးအပွင့်ဝေတဲ့ အထိစိုက်ပျိုးခဲ့တယ် ...။
ဆရာ သခင့်ဆီမှာ တပည့်တွေ ကုန်ပြီ ..။
စံပယ်အိုးလေးကို သေသေချာချာနေရာချရင်းတွေးမိခဲ့တယ် ...။
ကျွန်တော်ဟာ ဆရာသခင် အတွက် ရေစိုနေတဲ့ထင်းခြောက်ပဲလား .
သား ... မင်း မဟာဒီလှိုင်းဆိုတဲ့ ဆူမိုသမားကိုသိလား ... သူဘာကို ၀ါးမျိုပစ်သလဲ ..
ရန်မမူတတ်သူတွေကို ရန်မူတဲ့သူတွေကို မုန်းတယ် ...
မင်း ... ကိုယ်ချင်းစာတရားကို နားလည်မှုလွဲနေတယ် သား ... နောက်နှစ်ပြန်လာခဲ့ ...။
နောက်တစ်နှစ်မှာ ကျေးငှက်တွေရဲ့ရယ်မောသံကို ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ် ...။
သံပတ်တွေတင်းနေတဲ့တိမ်တိုက်တွေကို ပေါ့ပါးစွာငေးရင်း ..
ငါ့သား အချိန်တွေနည်းလာပြီဆိုတာ မင်းရောငါရောသိတယ် ... မင်းကလေးဆိုရင်လည်းပြန်ယူသွားပေါ့လို့ ငါတို့ရဲ့ရှေးဆရာကြီးက ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ ...
သူဟာငှက်မဟုတ်လို့ပဲပေါ့ ... လွတ်လပ်စွာပျံသန်းရတာပဲပျော်ဖို့ကောင်းတယ် ...။
ဆရာသခင်ဟာ ..သူ့သားမြီးယပ်ကို ဖျောင်းခနဲချိုးပစ်လိုက်တယ် ...
သား မင်း ချိုးကွေ့သွားပြီလား ...
ကျွန်တော့်ငှက်ကလေးက လက်ပေါ်လာနားရင်း ဆရာသခင်ကို အထူးအဆန်းလိုကြည့်တယ် ..။
ဆရာသခင့်မျက်စေ့ရှေ့ကကျွန်တော် ရို့ရို့လေးထွက်ခွာလာခဲ့တယ် ...။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာအရှင် ...
ရင်ဘတ်ထဲမှာ လလေးကို သိမ်းထားတတ်တုန်းပဲ ...
တခါလေ ... ဆရာသခင့်ကိုသတိရတယ် ...
မြင့်ရာဘုံကနေ သဘောပေါက်သွားတဲ့နေကြမှ ...
ဆရာနဲ့တပည့် သံသရာထောင့်ချိုးမှာ ပန်းပွင့်တွေမနိုးခင် ပြန်တွေ့ကြမယ် ...။
ဆရာ့အရှင့်ကို ဦးချဖို့ ... စောင့်နေဦးမှာပါ ...။ ။
သင်ယူခြင်းကို စက်ဆုတ်သော ဥယျာဉ်မှုး ...
Dedicated to sis ...